Isevisi Yokusekela I-RainpooTech - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi bekulokhu kugxilwe yi-Rainpoo. Umgomo wethu ukuhlinzeka isevisi yekhwalithi engcono kakhulu kumakhasimende ethu. Ithimba losekelo lobuchwepheshe liqinisekisa ukusetshenziswa okushelelayo kwekhamera ngayinye, ngesevisi yerimothi yesikhathi sangempela. Kungakhathaliseki ukuthi yini oyidingayo, i-Rainpoo izokuxazululela yona NGOKUSHESHA.
Isicelo sesondlo kanye nophenyo
Ukuze kusekelwe ukulungiswa kwekhamera, i-RainpooTech ifakwe ithimba lesevisi eliphelele ngemva kokuthengisa ukuxazulula izinkinga zokugcinwa komkhiqizo nganoma yisiphi isikhathi kumakhasimende. Ngamakhamera anephutha noma alimele, ungathumela isicelo sokukhanda kuwebhusayithi. Sizohlola izindleko zokulungisa nesikhathi sokulungisa ngemva kokuthola amakhamera anephutha.
Phakathi nenqubo yokulungisa, sizophendula ngenqubekelaphambili yesondlo noma kunini. Ngemva kokuqedwa kokulungiswa, sizohlola futhi sindize ikhamera ukuze siqinisekise ukuthi ikhamera isebenza kahle bese siyithumela ekhasimendeni.
Usekelo lobuchwepheshe bekhamera
Inkampani yethu inomnyango wokwesekwa kwezobuchwepheshe bekhamera, ohlanganiswe onjiniyela bethu abanolwazi lokusekela lobuchwepheshe, ilungu eliphakathi lesipiliyoni sokusekela seminyaka engaphezu kwemi-3. Ngemuva kokulethwa kwekhamera, inkampani yethu izoqoka onjiniyela bosekelo lwezobuchwepheshe ukuthi baqhube ukuqeqeshwa kwamakhamera kumakhasimende ukuze kuqinisekiswe ukuthi ama-opharetha angaphambili amakhasimende angakwazi ukusebenzisa ikhamera ngobuchule.
Ngemva kwalokho, uma unezinkinga ngohlelo lokusebenza lwekhamera, umnyango wokusekelwa kwezobuchwepheshe unganikeza isevisi yokusekelwa kwekhamera amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngesonto, inani elingenamkhawulo lezikhathi. Ukwengeza, ikhasimende ngalinye linomphathi wesevisi yamakhasimende oyedwa kuya kwelinye, uma unezidingo zesevisi yezobuchwepheshe, ungaxhumana nomphathi wenkonzo yamakhasimende nganoma yisiphi isikhathi, sizokukhonza ngenhliziyo yonke.
Uhlelo lokuqeqeshwa kobuchwepheshe ngemuva kokuthengisa
Inkampani yethu inomnyango wokwesekwa kwezobuchwepheshe bekhamera, owakhiwa onjiniyela bethu abanolwazi lokusekela ezobuchwepheshe, isipiliyoni sokusekelwa esimaphakathi samalungu singaphezu kweminyaka emi-3. Ngesikhathi sokulethwa kokuqala, inkampani yethu izoqoka onjiniyela bephrojekthi abaqeqeshiwe ukuthi baqhube ukuqeqeshwa okukude ku-inthanethi kumakhasimende, ukuze kuqinisekiswe ukuthi opharetha bamakhasimende abaphambili bayakwazi ukusebenza nezindlela zokunakekela ikhamera, futhi basize amakhasimende ukuthi azijwayeze. ikhamera ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi uyisebenzise ekusebenzeni. Izifundo zokuqeqesha ikakhulukazi zifaka ukuqeqeshwa kwethiyori yezithombe ze-oblique, ukuqeqeshwa kokusebenza kwezinsimbi, ukuqeqeshwa okusekela ukusetshenziswa kwesoftware, ukuqeqeshwa kokusebenza okusebenzayo, ukuqeqeshwa kokugcinwa komkhiqizo.
Interior work support technical
Ngokusho kokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi embonini kanye nempendulo evela kumakhasimende amaningi, iphuzu langempela lobuhlungu bephrojekthi ligxile emsebenzini wasehhovisi uma liqhathaniswa nomsebenzi wasensimini. Izinkinga emsebenzini wasehhovisi zibalelwa ku-80% yenani eliphelele lezinkinga kulo lonke iphrojekthi, futhi zizodla u-70% wesikhathi ukuxazulula yonke iphrojekthi.
Enkambweni yokwenza amaphrojekthi wesikhathi eside, u-Rainpoo uye wahlakulela inani elikhulu labasebenzi abanolwazi emsebenzini wangaphakathi , abangakwazi ukubhekana nezinhlobo ezahlukene zezinkinga emsebenzini wehhovisi. Enqubweni yokucubungula idatha, uma uhlangabezana nanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo, ungathintana neqembu le-Wechat yomuntu oyedwa, abasebenzi bethu bezobuchwepheshe bazokunikeza izixazululo ezichwepheshile.
E-China, amakhamera e-Rainpoo anamalensi amaningi namalensi awodwa asetshenziswa kakhulu emikhakheni efana ne-photogrammetry yokuthatha izithombe/i-3D live-action modelling/imephu yendawo.
Sizibophezele ekubeni abahlinzeki besixazululo abaphezulu emhlabeni jikelele ekutholweni kwedatha ye-geospatial kanye nokucutshungulwa kwedatha.
Siqongelele inombolo enkulu yobuchwepheshe obuyinhloko emikhakheni ye-optics, ukuzulazula kwe-inertial, i-photogrammetry, ukucutshungulwa kwedatha yendawo njll.
Imibuzo mayelana nokuqalisa? Sishiyele ulayini ukuze uthole okwengeziwe!
Ukusetshenziswa kwezithombe ze-oblique akukhawulelwe kulezi zibonelo ezingenhla, uma unemibuzo eyengeziwe sicela usithinte